लुकीलुकी प्रेमीलाई भेट्छिन् ज्योती मगर, बाहिरियो यस्तो भिडियो
काठमाडौँ । चर्चित गायिका ज्योगी मगर र गायक तेजस रेग्मीको अवाजमा सजिएको रमाइलो गीत ‘स्याल कुखुरी’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छोटो समयमानै गीतले सांगीतिक बजारमा राम्...
शेरबहादुरको प्रचारमा मह जोडी देखी दिपक दिपासम्म (भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रदर्शन मिती नजिकिदै गर्दा फिल्म शेरबहादुरको प्रचार प्रसार तिब्र बनाईएको छ । प्रचार प्रसारको विभिन्न उपायहरु प्रयोग गर्दै शेरबहादुर टिमले राजधानीमा सञ्चालित सफा ट्याम्पोहरुमा पनि फिल्मको प...
सुवास जिसीको फिल्म ‘फल्ट’ निर्माणको तयारीमा
काठमाडौं । इञ्जोय मुभिजको व्यानरमा नयाँ फिल्म ‘फल्ट’ घोषणा गरिएको छ । राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा फिल्मका निर्देशक सुवास जिसीले फिल्मले समाजमा आपूmलाई सभ्य भन्ने व्यक्तिले नकारात्मक काम गर्दा...
एजेन्सी । मलेसियाको सेन्सर वोर्डले भारतीय फिल्म पद्मावत आफ्नो देशमा रिलिज नगर्न आदेश दिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईको एक रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रिय फिल्म सेन्सर बोर्ड (एलपीएफ) को अध्यक्षले भने, ‘उक्त फ...
हलिउडलाई पछिपार्दै आमिर, ५ सय करोडलाई पछ्याँदै उनको फिल्म
काठमाडौं । दगंलर पीके पछि आमिर खानको फिल्म सिक्रेट सुपरस्टारले चीनमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आमिरको उक्त फिल्मले दुई हप्तामा ४१८ करोड कमाएको खुलासा गरिएको छ । साथै सो फिल्मले ५ सय ...
अमेरिकामा पिके, दंगल र बजरंगीको रेकर्ड तोड्दै पद्मावत, कहाँ कति व्यापार ?
दीपिका पादुकोण अभिनित फिल्म पद्मवत रिलिजपूर्व कर्णानी सेनाको विरोधका कारण विवादमा परेको थियो त्यही रिलिज पछि फिल्माका समिक्षकहरुको फरक फरक फिडब्याकले चर्चामा रहेको छ । फिल्मका समिक्षकहरुले जस्तो समिक...
बाबु बाेगटीले “सिउँदोमा कस्तो सिमाना कोरिछौ ” युट्युबमा ल्याए
काठमाडाैं । चर्चित गायक तथा नायक बाबु बाेगटीले सिउँदाेमा कस्तो सिमाना कोरिछौ नामक आफ्नाे पुरानाे गीत आफ्नाे नीजी युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । १२ वर्ष पहिले बाबुले आफ्नाे दाेस्राे एल्बमम...
मेशनाले ल्यायो अविरल बिसाउनीको रुनु पर्यो धेरै भाग २ “पुजारी” (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । एउटा दुर्गम गाउँको एकान्त बस्ति, जहाँ एक प्रेमी जोडीको प्रेम प्रगाड बन्दै गैरहेको हुन्छ , तर ति प्रेमी जोडी मध्य , प्रेमी बाहुन समुदाय भित्रको हुन्छ र अर्की प्रेमिका दलित समुदाय भित्रको हुन...
गायक प्रेम लामाले ल्याए “त्यो पारी लेकमा” भिडियो सहित
काठमाडौ । माघ १४ गायक प्रेम लामाले सेलो गीत “त्यो पारी लेकमा”बोलको गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । काभ्रेलि गायक लामाले चार एल्बम ल्याइसकेका छन् । “गीत सङ्गितमा संघर्ष हुनुपर्छ र समय अनुकुलको गीत सङ्गीत ...
युवराजलाई कसले पार्यो खुकुरीको चोटमा ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं । खुकुरीको चोटको उखान उल्लेख गर्न जति सजिलो छ त्यसले दिएको चोट सहन त्यो भन्दा पनि कठिन छ । यस्तै कठिन पिडाको सामना गर्दैछन् मोडल युवराज वस्ती । अर्की मोडल सागरी कार्कीले दिएको चोटको सामना गरे...
‘कान्छी’ले रुन बाध्य गरायो स्वेतालाई
काठमाडौँ । श्वेता खड्काको बहुप्रतिक्षित नेपाली चलचित्र कान्छीको अफिसियल ट्रेलर सार्वजानिक भएको छ । चलचित्र कान्छी नायिका श्वेता खड्का, दयाहाड. राई , अनु शाह , कामेश्वर चौरसिया लगायतका कलाकाहरुको अभिन...
प्रभासको विवाह तय, को हुन् ती भाग्यमानी युवती ?
एजेन्सी । चर्चित कलाकार प्रभासले निकट भविष्यमै विवाह गर्ने भएका छन् । ‘बाहुबली’को ऐतिहासिक सफलतापछि चर्चित भएका कलाकार प्रभासले बिहे गर्ने खवरले भारतीय मिडियामा चर्चा पाइरहेको छ । प्रभासले कहिले र को...
भारतमा पद्मावत फिल्म रिलिज रोक्न गाडी तोडफोड
नयाँ दिल्ली । फिल्म पद्मावत रिलिजविरुद्ध सक्रिय रहेको करनी सेनाका कार्यकर्ताले गुडगाउँमा यातायात ठप्प पारेका छन् भने नोयडामा बस तोडफोड गरेका छन्। सुरत र गुजरातका अन्य ठाउँमा निजी र सार्वजनिक गाडीमा आक...
के चौंथो बच्चाको सोचमा छन् शाहरुख ? यस्तो राखे नाम
शाहरुख खान अहिले उनको टक शो टेड टक इंडियालाई लिएर चर्चामा छन् । भारतीय टेलिभिजन च्यानल स्टार प्लसमा आउने उक्त कार्यक्रममा धेरै प्रशिद्ध व्यक्तिहरु आफ्नो अनुभव बाड्न आउँछन् । केही समय अघि उक्त कार्यक्र...
काँठे भाकाकी रानीले दुई रुपियाँको बिंडी लिएर आइन् (भिडियो सहित)
काठमाडौं । करिव २ दशक अघि माकुरी जालैमा गीतबाट गीत संगीतको यात्रा सुरु गरेकी सुमधुर स्वरकी धनी लोक गायिका सीता थापा जसलाई नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा काँठे भाकाकी रानी समेत भन्ने गरिन्छ । लामो समयको ...
उर्मिला र रमेश विरही आशुँको नयाँ पप गीत “ऐ कान्छी चुलबुले”
काठमाडौं । गायिका उर्मिला प्रजा र रमेश विरही आशुँको नयाँ पप गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रमेश विरही आशुँको शब्द रहेको“ ऐ कान्छी चुलबुले” बोलको गीत भैरबकालिका म्युजिक मार्फत बजारमा आएको हो ।...
एल्वम लन्चमा यसरी खोलिन युलीयाले आफ्नो र सलमानको सम्बन्ध
रोमानियाकी प्रसिद्ध टीभी पर्सानालिटी युलीया वंतुर अहिले उनको नयाँ एकल एलबम ‘हरजाइ’ लाई लिएर चर्चामा छिन् । एल्बम लन्च भएको मौका पारि उनले सलमान खान र उनको सम्वन्धका बारेमा खेलेर बताएकी छिन् र भनिन्, '...
‘मिस्टर झोले’, ले पाँच दिनमा कति कमायो?
काठमाडौं । नेपाली फिल्म बजार पछिल्ला महिना व्यावसायिक रुपमा खासै अघि नबढिरहेका बेला गत शुक्रबारदेखि लागेको 'मिस्टर झोले'ले भने राम्रो व्यापार गरेको छ। 'मिस्टर झोले'को कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै ...
फिल्म पद्मावतः २५ जनवरीमा रिलिज गर्न भारतको सर्वाेच्च अदालतले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । विवादै विवादले घेरिएको वलिउड फिल्म पद्मावतलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभर रिलिज गर्ने स्वीकृति दिएको छ । अब यो फिल्म २५ जनवरी (माघ ११) मा सबै राज्यमा रिलिज हुनेछ । भारतीय जनता पार्टीको ...
अञ्जु पन्तको स्वरमा नायिका प्रतिक्षाको दमदार अभिनय (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा एउटा म्युजिक भिडियोमा नायिका प्रतिक्षा खड्काले दमदार अभिनय गरेकी छिन् । पछिल्लो समय मोडलिङमा व्यस्त नायिका खड्काद्वारा अभिनित ‘तिम्ले माया मारेर’ बोलको नयाँ...